शशिकलालाई मिस तामाङको ताज - Samadhan News
शशिकलालाई मिस तामाङको ताज
समाधान संवाददाता २०७६ माघ ६ गते १२:२२
मिस तामाङ पोखराको ताज लेकसाइडकी शशिकला तामाङले चुमेकी छन् । ग्रान्ड फिनालेमा १६ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शशिकलाले ताज पहिरिएकी हुन् । उनले मिस ट्यालेन्टको टाइटलसमेत हात परेकी छन् । उनले १ लाख नगद, ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्रसहित म्युजिक भिडियोको अवसर प्राप्त गरेकी छन् ।
प्रमुख निर्णायक नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामाले तामाङ समुदायको विकासका लागि के योगदान दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिँदै अन्य प्रतियोगीलाई पछि पारेकी हुन् ।
सलिना तामाङले फस्र्ट रनरअपसँगै बेस्ट वाकको टाइटल जितिन् । उनले नगद ५० हजार रुपैयाँ, ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् । प्रतिश्पर्धामा बेस्ट पर्फमरको टाइटल जितेकी रेनु तामाङ सेकेन्ड रनरअप बनिन् । रेनुले ३० हजारसहित ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र हात पारिन् । ब्युटी विथ प्रपोजमा प्रिती वाइवा तामाङले २० हजार पुरस्कार जित्न सफल भइन् ।
प्रतियोगितामा बेस्ट हेयर अनिशा तामाङ, बेस्ट स्माइल विन्दु तामाङ, मिस फोटोजेनिक किस्मत तामाङ, बेस्ट स्किन सरस्वती तामाङ, मिस कल्चर कोमल तामाङ, मिस डिसिप्लिन सिर्जना ब्लोन तामाङ, मिस ग्रेसफुल सुजाता तामाङ, बेस्ट पर्सनालिटी सिर्जना घिसिङ तामाङ, मिस कन्फिडेन्ट आकृति तामाङ, मिस पङ्चुअल भूमिका तामाङ, मिस पपुलर मनिषा तामाङ, मिस अर्गनाइजर च्वाइस सुमिक्षा तामाङ र मिस फ्रेन्डली स्वस्तिका तामाङ बनिन् ।
मञ्जुश्री संवत २८५६ सोनाम ल्होसारको अवसरमा आयोजना गरिएको ल्होसार म्युजिक फेस्टिभल तथा ५ औं संस्करणको मिस तामाङ पोखराको उद्घाटन गर्दै पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर ताामाङले भाषा र भेष, संस्कार र संस्कृति रहे मात्रै पहिचान रहने बताए । उनले आजको युवा पुस्तालाई बढ्दो पाश्चात्य र आधुनिक सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट जोगाउन आफ्नो मौलिक संस्कृतिप्रति झुकाव बनाउन प्रेरित गर्नु पर्ने समय आएको बताए ।
ब्राह्मण समाज नेपालका अध्यक्ष डा. नारायण अधिकारीले हाम्रो सभ्यताको विकास हिमालय सेरोफेरोमै रहेको भन्दै वुद्धको जन्मभूमी भएको देश नेपालमा अन्य संवत भन्दा पनि वुद्धको संवतनै चलनचल्तीमा ल्याउन सके नेपालीको हितमा हुने धारणा राखे ।
बैदाम तामाङ सेवा समाजका अध्यक्ष ज्याक तामाङको अध्यक्षतामा भएका कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष जयन्ती मोक्तानले स्वागत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक वाइवा तामाङ, नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामा, सिजी ब्रुअरीका रिजनल म्यानेजर सुवोध रिजाल लगायतले बोलको थिए ।
कलाकार सोनाम तोप्डेन, हास्य कलाकार सन्दिप क्षेत्रीले तामाङ सांस्कृतिक नृत्य, गायनका साथै हास्य प्रस्तुती राखेका थिए । कार्यक्रमका निर्णायकमा नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामा, सौन्दर्यविद चिनु गुरुङ, गीतकार तीर्थ तामाङ, मोडेल तथा कोरियोग्राफर विशाल गुरुङ, सुर्विन वान्तवा राई रहेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन संयोजक कविता योञ्जन, सुमन ढुंगाना, निमा लामा र डोल्मा लामाले संयुक्तरुपमा गरेका थिए ।